🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10+ 5G kahor Huawei P30 Pro sawir qaadista ✅
Samsung Galaxy Note 10+ 5G kahor Huawei P30 Pro sawir qaadista
Khilaafaadka waxaa loo adeegaa: sida ku xusan heerka DxOMark ee dhawaanta la soo bandhigay Samsung Galaxy Note 10+ 5G waxay leedahay waxqabad sawiro oo ka wanaagsan Huawei P30 Pro, ilaa iyo hada tixraac iyo ku dhawaad ​​hogaamiye aan lagaran karin qeybta Android.
Dagaalkii sawir qaadista ayaa ficil ahaantii ugu dambeeyay ee ka haray dagaalka adduunka casriga ah. Jiilba jiilka ka dambeeya muraayadaha indhaha ayaa horumarinaya oo ay weheliyaan sirdoon macmal ah oo wax walba daboolaya.
Marka sidaa la yaab maahan in Terminalyo cusub ay ka gudbaan kuwa kale bilooyin ka dambeeya. Bilooyin kaas oo qaybtan u muuqda inay sanado ka hor maelstrom of moodello cusub iyo teknolojiyadda cusboonaysiiyay.
Sida ku xusan xogta uu siiyay DxOMark, labada kamarad gadaal iyo midka u go’ay is-beddelka Galaxy Note10 + 5G way ka wanaagsan yihiin kuwa la midka ah calanka astaanta calanka Shiinaha ee Huawei.
Dhibcaha ay heshay kaamiradeeda ugu weyni waxay ahayd 113 (ee 112 ee P30 Pro) halka kamarad hore waxay heshay 99 (89 ee P30 Pro). Labada natiijadoodba waxay ka dhex heleen xubin ka tirsan qoyska cusub ee Galaxy ilaa booska koowaad ee darajada.
Heer wanaagsan, borotokoolka markii la falanqeynayo kaamerooyinka casriga ee DxOMark waa la qeexay oo wuxuu adeegsadaa habka sayniska ee lagu adeegsanayo aaladda sheybaarka warshadaha.
Sidee ayay yihiin kamaradaha Samsung Galaxy Note 10+
Calanka cusub ee Samsung ayaa leh 4 kamaradood kuwaas oo isku-darka ayaa gaadhay dhibcaha ugufiican ee lagu duubay taariikhda ilaa casriga:
Qolka ugu weyn: Waxay ka koobantahay 12 leynpixel lenti oo leh xasiliyaha indhaha (OIS) oo na siin kara f / 2.4 haddii iftiin wanaagsan uu ka jiro goobta ama f / 1.5 marka la toogto habeenkii ama nal aad u yar.
Xagal ballaadhan: 16 megapixels f / 2.2 iyo xagal 123º.
Telephoto: a 12 megapixel f / 2.1 lens leh 45º isha iyo dejinta adke e.
Dareenka qoto dheer: Waxay u heellan tahay cabirista masaafada waxayna leedahay f / 2.4 iyo xagal 72º. Kaliya waxaa lagu heli karaa Xusuusta 10+
Iyada oo tani ay tahay aar poker Samsung Galaxy Note 10+ 5G waxay garaacday Huawei P30 Pro duurka sawirrada Ilaa hadda wuu hogaamiyay. Waa inaan ku aragnaa falanqaynta haddii maalinba maalinta ka dambaysa farqiga sidoo kale la dareemayo ama uu yahay tiro tiro warqad ah.